Three Knutby Vafundisi kusungirwa | Apg29
Three Knutby Vafundisi kusungirwa
vaimbova vashumiri vatatu Philadelphia Church Knutby chichange nokupomerwa neChitatu.
Mumwe vaipomerwa vachava Asa Waldau, zvakazivikanwa somwenga waKristu pashure kupondwa mudzimai mufundisi uye vakaedza umhondi muvakidzani ari Knutby muna 2004.
hofisi muchuchisi wacho waiti kuti kupomera akawanda zviitiko zvakaipa uye kushinha kuzvimiririra munhu.
Mumagazini The zuva rine psychotherapist Rigmor Robert akaudza pamusoro hurukuro anofudza kuti yakaitwa muchechi, siyana vanoshungurudzwa akaita se anokurovai, munhu akatsika, tufts bvudzi kunge aipfeka kure, rakachengetedzwa akarumwa uye kushinha kwakaitika.
Mupepanhau Expressen inoti Vachuchisi Liselotte Herschend mwenga waKristu (Asa Waldau) haina vaifungidzirwa bonde mhosva. Ari vaifungidzirwa kushungurudzwa.
Kwevafudzi matatu kupomerwa ndivo chete kuti kusungirwa pabonde mhosva.
Maiva muna 2004 kuti kuponda uye aedza umhondi kwakaitika muungano yechiKristu Philadelphia Knutby.
Izvi akawana paupamhi nzeve mune Swedish vezvenhau kuti yave kuti zvichinzi uye akaita mishumo yakawanda panyaya. Vari wakavhomorwa kuteerera mwenga waKristu-dzidziso.
"Chii shoma kuzivikanwa ndechokuti ungano Knutby vanoramba kuti Jesu ndiye Mwari. Izvi chakakomba zvikuru."
Mwenga waKristu School
dzidziso Kristu chicks unonyanyozivikanwa muna Knutby. Asi manyepo ichi zviri chinhu rakasiyana kuti Knutby.
Dzidziso iyi refu aripo mukati Catholic Church . Zvakanga zvichida pakuti Knutby ndechokuti ivo vairatidza kuva pachake niche dzavo.
Angaramba kuti Jesu ndiye Mwari
Chii zvishoma kuzivikanwa ndechokuti ungano Knutby vanoramba kuti Jesu ndiye Mwari . Izvi chakakomba zvikuru.
Unofunga angaramba kuti Jesu ndiye Mwari - zvino uri kuramba kuti ndiye Ishe uye haugoni kuponeswa!
"On 20 May 2018 yaiva pasi Philadelphia Church Knutby. Paivawo nhengo mbiri chete."
Kereke yakavharwa muna 2018
1921 akavamba Knutby Philadelphia somunhu Pentecost gungano.
Panguva nokuponda uye aedza umhondi muna 2004, ari Philadelphia Church anenge 90 nhengo. Paiva kaviri vazhinji pamberi paAsa Waldau Yakasvika.
On 20 May 2018 aiva Philadelphia Church Knutby pasi. Paivawo nhengo mbiri chete.